Ụbọchị My Pet » 5 Ihe ụmụ agbọghọ Mgbe a Gbasara
emelitere ikpeazụ: Oct. 17 2020 | 2 min agụ
Ka ihu ya, agbaji-acha ọkụ na-esi ike. N'agbanyeghị onye butere ya, mbụ izu ole na ole ndị o yiri ka toughest. Ezie, emecha, anyị niile na-aga n'ihe chọta ọzọ n'anya, e nwere ihe ole na ole na ụmụ agbọghọ na-eme mgbe agbasa. A ole na ole na-depụtara n'okpuru ebe:
1. Mkpu – a otutu
Ma ọ bụ N'icheta n'elu a na ebe nchekwa, onyinye, song, ma ọ bụ a random tiwaputara mmetụta uche, na-eti mkpu ga-apụghị izere ezere-eme. Ịbụ na-afụ ụfụ na-egosi mmetụta uche bụ nzọụkwụ mbụ na post ezumike-elu-agwọ usoro.
2. Facebook akpa ya bụbu
Na njupụta nke mmadụ mgbasa ozi, nke a bụ ịbụ kacha doro anya ma na-ebibi ihe ụmụ agbọghọ na-eme mgbe a ezumike-elu. Ọbụna mgbe un-friending, ụmụ agbọghọ nwere ike ọ gaghị enyere ma pịnye ke aha ya bụbu n'ime search mmanya na nọgidere stalk ya na ihe niile foto, peeji nke, na ọnọdụ ọ mmasị ma ọ bụ kwuru na.
3. Akwụsị shaving
Ka a na-eme iji na-akwado Feminism na angst nke ịbụ na oké iwe mmadụ na. Ọ na-bụ n'ihi na eziokwu na ihe nile nke obi ezumike ụmụ agbọghọ ihu doo obere ọ bụla ume. Ọzọ, ịbụ ọhụrụ otu ọ dịghị onye na ime na ụmụ agbọghọ nwee ike ilekọta obere ma ọ bụrụ na ya ụkwụ bụ afụ ọnụ ma ọ bụ.
4. Na-aga ebe a “floozy” ogbo
Nke a na-adabere na ogbo nwa agbọghọ na-girl na-na-adabere na otú oge mmekọrịta kere. Ma, ọ bụ nchebe na-ekwu na n'agbanyeghị ihe, ọ bụla nwa agbọghọ na-aga ebe a na ogbo n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Ma ọ bụ na onye ọtụtụ ọṅụṅụ, sexting, ma ọ bụ na-enyi na enyi na otutu ụmụ okorobịa.
5. Reinvents onwe ya site na onwe-chọpụtara na-agbalị ihe ọhụrụ
Site akwụkwọ enyemaka onwe onye na-akpali fim na akwụkwọ na-yoga, ọ bụla nwa agbọghọ na-agbalị reinvent onwe ya. Nke a ngụgụ obi dị ezigbo mkpa na okpukpu-elu okirikiri dị ka ọ bụghị nanị na-enyere aka hazie ihe ndị na-eru uju ma ọ bụ a doo anya oge ebe ụmụ agbọghọ na “chọta” onwe ya.
Ezie na ịhụnanya na-afụ ụfụ, ọ dị mkpa ka cheta na ịhụnanya na-emekwa ka unu sie ike.
Ị Dị Njikere mehie Iji A Pet?